माघे संक्रान्तिका खाद्य परिकारका विशेषता र महत्व « Janata Samachar
माघे संक्रान्तिका खाद्य परिकारका विशेषता र महत्व
काठमाडौं । चाडपर्व, रीतिरिवाज, र संस्कृतिले धनी हामी नेपाली अनेक चाडपर्वहरु मनाउने गर्दछौँ । संस्कृति झल्काउन र सम्वद्र्धन गर्न, आफन्त इष्टमित्रहरुबीच मिलाप गराउन र दु:ख सुख आदनप्रदान गर्नका लागि चाडपर्व एउटा राम्रो अवसर पनि हो । हाम्रा प्रत्येक चाडपर्वहरुको आफ्नैविशेषताहरु रहेका छन् । यी चाडपर्वहरुमा हामीले उपभोग गर्ने खाद्य वस्तुको पनि आफ्नै विशेषता र महत्व रहेको छ ।
माघ महिनाको पहिलो दिन, माघे संक्रान्ति पर्व जसलाई माघी र मकर संक्रान्तिको नामले पनि चिनिन्छ । यस पर्वमा घिउ, चाकु, तिलको लड्डु र तरुल पिडालु आदि खाइन्छ । यो पर्वमा खाइने यी खानेकुराहरु स्वास्थ्यका लागि निकै राम्रो मानिन्छ ।
१. घिउ :
शरीरलाई आवश्यक पर्ने फ्ल्याटको प्रमुख श्रोतमध्ये घिउ पनि एक हो । बालकदेखि वृद्धसम्म सबैले घिउ सेवन गर्न सक्छन् । घिउको सेवनले हाम्रो शरीरमा तागत प्रदान गर्छ । घिउले छालालाई स्वस्थ राख्ने र स्मरण क्षमता पनि विकास गर्छ । घिउको सेवनले कब्जियत भएकाहरुलाई निकै फाइदा पुग्छ । घिउको सेवनले रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताको वृद्धि गर्नुका साथै शरीरमा भिटामिन डि अन्तरघुलन गर्न मद्दत गर्छ । घिउले रगतमा चिनीलाई रेगुलेट गर्नुका साथै मेटावोलिक डिसअर्डरको खतरालाई समेत कम गर्छ ।
२. चाकु :
चाकु मसिनो जातको उखुको रस वा सख्खर पकाएर राम्ररी छानेर जमाइएको गुलियो खाद्य पदार्थ हो । चिसो मौसममा चाकु खानु स्वास्थ्यको लागि एकदम फाइदाजनक हुन्छ । चिसोलाई छल्न र चिसोबाट बच्न चाकु खाने प्रचलन निकै पूरानो हो । चाकु खादा शरीरको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ । चिसो शुरु हने बित्तिकै बालबालिकाहरुलाई चाकु खुवाउनु स्वास्थ्यका लागि निकै राम्रो हुने कुरा पोषण विज्ञहरु बताउछन् । सुत्केरी अवस्थामा आमाको दूध कम आउने समस्याका लागि पनि चाकु खुवाइन्छ । चाकुले शरीरको चिसो हटाएर हामीलाई स्वस्थ रहन मद्दत गर्छ ।
३. तिलको लड्डु :
तिलको लड्डु खाँदा जति स्वादिलो हुन्छ त्यति नै लाभदायक पनि छ । चिसोमा तिलको सेवन गर्दा शरीरको तापक्रम सन्तुलन हुनुका साथै तिलले मुटु, मस्तिष्क र हड्डीलाई मजबुत बनाउन मद्दत पनि गर्छ । तिलमा पाइने म्याग्नेसियम तत्वले मधुमेह रोगीहरुलाई पनि फाइदा पुग्छ । तिल आफै नजम्ने अनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिड भएकाले यसले पाचन प्रक्रियालाई समेत बलियो बनाउछ । भिटामिन ई पाइने तिलको सेवन गर्दा इमयुनिटी पनि बढाउँछ ।
४. तरुल :
तरुल निकै स्वादिलो र स्वास्थ्यवर्द्धक कन्दमुल हो, जुन माघे संक्रान्तिमा खाइन्छ । तरुलमा फालेट नामक तत्वका साथै आइरन मिनिरल पनि पाइन्छ जसले गर्भवतीको भ्रुण विकासमा मद्दत गर्नुका साथै हड्डी बलियो बनाउँछ । तरुलको सेवनले महिनावारी सन्तुलन, छालामा र कपालमा निखारता, स्मरण शक्तिको विकास र रक्त अल्पताबाट समेत बचाउँछ । मुटु स्वस्थ राख्न मद्दत गर्ने तरुलमा सोडियम, फ्यायाट, सुगर, कार्बोहाइड्रट, पोटासियम, फाइबर, पोलिस्याचुरेटेड फ्ल्याट र क्यालोरी प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ ।
ट्रकले कुल्चिँदा १५ मजदुरको ज्यान गयाे
काठमाडौं । भारतको गुजरातमा ट्रकले कुल्चिँदा १५ जनाको ज्यान गएको छ । गुजरात सुरत स्थित
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको १५० वर्षीय इतिहासमा आफ्ना उत्तराधिकारीलाई व्हाइट हाउसमा स्वागत नगर्ने राष्ट्रपति